ဒီနေ့မှာတော့ ကျနော့် ဘလော့ဂ်ကို လာလည်တဲ့ မိတ်ဆွေများကို ကျနော် ရောက်ခဲ့တဲ့ စာကြည့်တိုက် အကြောင်းကို တင်ဆက်ချင်ပါတယ်။
Posted by ကလိုစေးထူး at 7:21 PM
ကိုကြီးစေးထူးရေ အဲဒီ Nature Travel စာအုပ်လေးဖတ်ချင်တယ်ဗျ ဖတ်ပြီးရင်ပြောပြပါလား upload တင်ပေးလို့ရော ရဘူးလားဟင် :)
Nov 13, 2007, 11:43:00 PM
ဟုတ်ပါ့အစ်ကိုရယ်။ စာကြည့်တိုက်ကြီးကခမ်းနားလိုက်တာ။ ပညာရှာဖို့အင်မတန်မှကောင်းတဲ့နေရာပါပဲ။ ဒီရောက်ခါစတုန်းကလည်း အရမ်းကိုအံ့သြမိတယ်။ စာကြည့်တိုက်ကိုပဲခဏခဏလာချင်မိအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်
နော်။ သမီးတို့အခုနေတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့စာကြည့်တိုက်နဲ့အထဲကပုံစံတွေကခပ်ဆင်ဆင်ပဲ။တစ်ပုံစံတည်းလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်။ အပြင်ကတော့မတူဘူးပေါ့။ အဲဒါဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲဟင်။
Nov 14, 2007, 8:16:00 AM
ကိုစေးထူး .. ဒီပို့စ်လေးက အတော်လေးဗဟုသုတ ဖြစ်စေပါတယ် ။ ပညာရေးဘလောဂ့်မှာ ပြန်တင်ခွင့် ပေးပါ ။
Nov 14, 2007, 10:21:00 AM
Let's me think!!
In burma,Do we have that kind of Libarary in Yangon?
If so,where is it?
Can everybody can use freely?
Nov 14, 2007, 12:54:00 PM
“စာကြည့်တိုက်မှာ..” ကို ဖတ်လိုက်ရတော့ ကျနော်တို့ တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတော်က အင်မတန်သေးငယ်လှတဲ့ စာကြည့်တိုက်ကို ပြေးသတိရမိပါတယ်။ ကျောင်းသားဘ၀က အဲဒီ စာကြည့်တိုက်ထဲကို အချိန်တော်တော်များများရောက်ခဲ့တယ်။ သို့သော် စာကြည့်တိုက်က စာအုပ်ငှားဖတ်တာထက် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကျောင်းစာ ၀င်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေက များတာပေါ့ဗျာ။
စင်ကာပူရောက်တော့လည်း စာကြည့်တိုက်ကြီးတွေ ဟီးနေတာကိုတွေ့နေရ။ သို့သော် ကျနော်တို့မှာ ရေငတ်တုန်းရေတွင်းထဲကျလို့ ပြောရမယ့်အစား “မျောက်အုန်းသီး”ရ လို့ပြောရရင်ပိုမှန်မယ်။ ဘယ်လို ထိထိရောက်ရောက်သုံးရမယ် မသိသေးဘူး။ ကျနော် လိုင်ဘရီက စာအုပ်တွေ ကြိုးစားပမ်းစား ငှားဖတ်ပါတယ်။ သို့သော် စာဖတ်တဲ့အလေ့က သိပ်မရင့်သန်ခဲ့တာက တကြောင်း၊ အင်္ဂလိပ်စာမကောင်းတာကတကြောင်း ထင်သလောက် ခရီးမပေါက်လှဘူး။
သို့သော်….စာဖတ်ခြင်းကြောင့် ဗဟုသုတနဲ့ အသိဥာဏ် ရင့်သန်နေတဲ့သူတွေကို ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လက်တွေ့မျက်မြင် တွေ့နေရတော့ စာကြည့်တိုက်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကြီးမားပုံကိုတော့ သိနားလည် ခံစားလို့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ စာကြည့်တိုက်ဆိုတာ လူတွေရဲ့ အသိဥာဏ်ကို ဖွံ့ထွားအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာ။ လူတွေ့ရဲ့ ဥာဏ်အလင်းကို ဖွင့်ပေးတဲ့ နေရာတခုဘဲ။
ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်က ကျေးလက်တောရွာလေးတွေမှာ ကလေးဖတ်စာပေကစလို့ အမျိုးအစားစုံလင်တဲ့ စာအုပ်တွေ ထားရှိနိုင်တဲ့ စာကြည့်တိုက်ကလေးတွေ ပေါ်လာအောင် ကျနော်တို့ ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျနော်သိတဲ့ မိတ်ဆွေတချို့ဆိုရင် ရန်ကုန်နဲ့ မဝေးလှတဲ့ မြို့ငယ်တခုမှာ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စလုပ်နေကြတာ အတော်လေး ခရီးရောက်နေပြီ။
စာကြည့်တိုက်ကြောင့် ကျနော်တို့ ဥာဏ်အလင်းရောင်ဟာ မီးရှူးတိုင်တမျှ ထိန်ထိန်ညီး မလာရင်တောင်မှ ဆီမီးခွက်လောက်တော့ လင်းလက်လာနိုင်မှာပါ။ အဲသည် ဆီမီးခွက်ကလေးတွေ မြန်မာပြည်အနှံ့မှာ လင်းလက်လာတဲ့တနေ့ကြရင် အခုမြန်မာပြည်ပေါ်မှာ ကြီးစိုးနေတဲ့အမှောင်ထုကြီးဟာလည်း ပျက်ပြယ်ရတော့ပေမပေါ့ဗျာ။
Nov 14, 2007, 7:38:00 PM
ကိုစေးထူးရေ.. ခုမှပဲ စာကြည့်တိုက်ထဲကို သေသေချာချာ ၀င်ကြည့်ဖြစ်တယ်.. အဆင်ပြေအောင် ဘက်စုံက ဖြည့်ဆည်းပေးထားတာ အားကျ အတုယူစရာပဲ..
ညီမမယ်လိုဒီရေ…၊ အဲဒီစာအုပ်က စာမျက်နှာပေါင်း ၂၈၀ ကျော်တော့ ပြီးအောင် ဖတ်နိုင်ပ့ါမလားတောင် မသိဘူး။ :D စာအုပ်ကို Nature Company Guide အနေနဲ့ ထုတ်ပြီးတော့ David Rains Wallace, Dwight Holing, Susanne Methvin တို့က ပြုစုပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့်ကတော့ အမေရိကန်က သဘာဝ တောတောင်၊ ရေမြေနဲ့ တိရစ္ဆာန်တချို့ အကြောင်း၊ Nature နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပန်းခြံတွေ အကြောင်း ပြုစုထားတာပါ။ သေချာတာကတော့ အဲဒီစာအုပ်ကို ဘယ်လိုမှ ပြီးအောင် ဖတ်နိုင်ဖို့ မလွယ်တာပါပဲ။ :D ဗဟုသုတ သဘော လေ့လာချင်တာနဲ့ ငှားလာတာပါ။
၀င်္ကပါ…၊ စာကြည့်တိုက်က ခမ်းနားတယ်ဆိုတာထက် စာလာဖတ်ချင်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်လို့ ပြောရင် ပိုမှန်မယ်ထင်တာပါပဲ။ ဒါတောင် နယ်မြို့သေးသေးလေးက စာကြည့်တိုက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ နေရာကတော့ ကျနော်နေတဲ့ မြို့မှာပါ။ :D
ဂျစ်တူး…၊ ပညာရေး ဘလော့ဂ်မှာ တင်မှာကို ကျေးဇူးတောင် ပြန်တင်ရအုံးမှာပါ။ :)
Anonymous ခင်ဗျာ၊ မြန်မာပြည်မှာ အဲဒီလို စာကြည့်တိုက်မျိုး လောလောဆယ်မှာ မရှိသေးပေမယ့် နောင်တချိန်မှာ ရှိလာခဲ့ရင်ပေါ့…။ :)
ကိုပေါ…၊ ကျနော်လည်းပဲ ဒီက စာကြည့်တိုက်ကို မြင်တော့ ကျနော်တို့ နယ်မြို့က စာကြည့်တိုက်လေးကို သတိရမိပြီး တင်ဖြစ်တာလဲ ပါပါတယ်။ သူတို့လောက် တခမ်းတနားကြီး မလုပ်ပေးနိုင်သည့် တိုင်အောင် ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေ ပညာရေး မြင့်မားစေဖို့အတွက် အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ ဒါကို စေတနာ တကယ်ထားပြီး လုပ်ရင် ဘယ်လောက်များ ကောင်းလိုက်မလဲလို့လဲ တွေးမိပါတယ်။ မှတ်ချက်ကို ဂရုတစိုက်နဲ့ ရေးပေးသွားတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ။
နုစံ…၊ ဟုတ်ပါတယ်…၊ အားကျစရာကောင်းလွန်းတာတော့ အမှန်ပါပဲ။
မှတ်ချက် ပေးကြသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
လာဖတ်တာ နောက်ကျသွားတယ် ကိုကိုကြီးမောင်စေးထူးရေ
အဲဒီအထဲက စာအုပ်တွေ ကုန်အောင်ဖတ်နော်။ :P
Nov 15, 2007, 6:00:00 AM